5 Waxyaabood oo Nin kasta oo jeeb maran ama Shiid ah uu ka filayo Xaaskiisa | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»5 Waxyaabood oo Nin kasta oo jeeb maran ama Shiid ah uu ka filayo Xaaskiisa
Waxaa jira dhowr nooc oo kamid ah ragga jeebka maran, kan ugu wanaagsan waa kan horey u socda isagoo shiid ah oo riyooyin iyo himilo leh isla markaana howl karka ah si uu guusha uu rajeynayo u gaaro.
Waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa 5 waxyaabood oo nin kasta oo shiid ah uu ka filayo xaaskiisa.
Nin kasta oo shiid ah ama aanan lacag heysan isla markaana si adag u dadaalaya si uu berri meel wanaagsan u gaaro waxa uu gabadhiisa ka filayaa inay imaanka ku qabto isla markaana ay aaminsanaato riyooyinkiisa iyo hamigiisa, rumeyso inuu taasi gaarayo.
Nin kasta oo shiid ah waxa uu gabadhiisa ka filayaa inaysan liidin ama u arkin qof aanan waxba galin maxaa yeelay waa shiid, waxa uu ka rajeynayaa inay xushmad kula dhaqanto isla markaana aysan ku jees jeesin.
Inaad dhiiri galisid
Nin kasta oo aanan waxba heysan ama shiis ah waxa uu ka filayaa xaaskiisa inay noqoto isha koowaad ee dhiiri galisa, waxa uu ka filayaa inay had iyo jeer garab taagnaato si at u dhiiri galiso xittaa waqtiyada uu xaalka ku adagyahay oo ay ku dhiiri galiso inuu berry ka bixi doono ama guuleysan doono.
Inay berri ka fekerto
Nin kasta oo jeeb maran waxa uu gabadhiisa ka filayaa inay berry eegto isla markaana ay aaminto in berri ay noloshooda isbedeleyso.
Niman kale hala shukaansan
Cabsida ugu badan ee ay qabaan ragga shiidka ah ayaa ah in gabdhahooda ay rag kale ku qiyaanaan—gaar ahaan ragga taajiriinta ah.
Nin kasta oo jeeb maran waxa uu gabadhiisa ka filayaa inay daacad u ahaato oo ay imaanka ku qabto.
Ninka jeebka maran ee howlkarka ah uma arko xaaladda uu markaas ku jiro inay tahay dhammaadka safarkiisa; meel sare inuu gaarayo berry ayuu eegaa — berri ayaa u noqoneysa maalin kale oo wanaagsan waxa uuna gabadhiisa ka rabaa si lamid ah sidaas.